Ma jiraa ciqaab weligeed ah, World Church of God Switzerland (WKG)
Weligaa miyaad haysataa sabab aad ku ciqaabto ilmo aan addeecin? Weligaa ma sheegatay in ciqaabtu weligeed dhammaan doonin? Waxaan hayaa dhowr su'aalood oo dhammaanteen ah oo carruurta leh. Waa tan su'aasha koowaad: Ilmahaagu weligiis ma ku caasiyoobay? Hagaag, waqti yar qaado si aad uga fikirto haddii aadan hubin. Hagaag, haddii aad ku jawaabtay haa, sida waalidiinta kale oo dhan, waxaan u nimid su'aasha labaad: weligaa ma ku ciqaabday cunuggaaga caasinimo? Waxaan u nimid su’aasha ugu dambeysa: Muddo intee le’eg ayay ciqaabtu socotay? Si cad, miyaad dhahday ciqaabtu way sii socon doontaa? Taasi waxay umuuqataa waalan, miyaanay ahayn?
Annaga oo ah waalidiinta tabar daran oo aan dhammaystirnayn ayaa cafin carruurteenna markay na addeecaan. Waan ku ciqaabi karnaa xitaa haddii aan u maleyno inay ku habboon tahay xaalad, laakiin waxaan la yaabanahay intee baa naga mid ah u tixgelin doonnaa inay sax tahay, haddii aan waalli ahayn, si aan kuu ciqaabno inta ka hartay noloshaada.
Laakiin qaar Masiixiyiin ah ayaa raba inaynu rumeysanno in Ilaaha ah Aabbiheenna jannada ku jiraa, oo isagu aan tabar lahayn ama aan dhammaystirnayn, uu ciqaabo dadka weligiis iyo weligiisba, xitaa dadka aan weligood injiilka maqlin. Oo ka hadal Ilaah inuu yahay nimco iyo naxariis badan.
Aynu si yar u qaadno oo aan ka fikirno, maaddaama uu jiro faraq weyn oo u dhexeeya waxa aan ka baranay Ciise iyo waxa Masiixiyiinta qaar ay aamminsan yihiin in weligeed la xukumi doono. Tusaale ahaan: Ciise wuxuu ina farayaa inaan jeclaano cadaawayaasheena iyo xitaa inaan wanaag u qabanno kuwa neceb oo na silciya. Laakiin qaar ka mid ah Masiixiyiinta ayaa rumeysan in Ilaah uusan necebayn cadaawayaashiisa oo keliya, laakiin uu macno ahaan u oggolaado inay xanuujiyaan taasna si deg-deg ah oo naxariis la'aan ah weligiis.
Dhanka kale, Ciisena wuxuu u duceeyey askartii isagoo leh, "Aabe, cafi, ma garan doonaan waxay samaynayaan." Laakiin Masiixiyiinta qaar ayaa baraya in Eebbe cafiyo kaliya kuwa yar ee uu u saadaaliyay in la cafiyi doono xitaa intaan adduunku abuurin. Hagaag, haddii taasi run tahay, markaa salaadda ciise ma aysan sameyn laheyn isbadal weyn, sax?
In alla inta aan bini'aadamka jecel nahay carruurteenna, intee in ka badan ayuu Ilaah jeclaadaa? Tani waa su'aal ku saabsan ereyga - Ilaah baa iyada si aan xad lahayn u jeclaada.
Ciise wuxuu yiri: "Aabe dhexdiina yaa ku jira oo markii wiilkiisa kalluun weydiista ah, wiilkiisa siiya masaska kalluunka? ... Haddii aad shar xun tihiin waxaad carruurtiinna siin kartaan hadiyado wanaagsan, intee in ka badan ayuu Aabbuhu siin doonaa Ruuxa Quduuska ah kuwa isaga weyddiista! (Luukos 11,11-13).
Runtu waa sida Bawlos noo qoray: «Ilaah runti wuu jecel yahay dunida. Maxaa yeelay, Ilaah sidaasuu dunida u jeclaaday oo uu siiyay wiilkiisa keliya, sidaa darteed in kuwa isaga rumaystaa aysan lumin, laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah. Maxaa yeelay Ilaah wiilkiisii ​​uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaadiso isaga. (Yooxanaa 3,16: 17).
Waad ogtahay in badbaadinta dunidan ay tahay adduun uu Ilaah aad u jecel yahay sidaa darteed wuxuu u soo diray wiilkiisa si uu u badbaadiyo - waxay kuxirantahay Ilaah iyo Ilaah keliya. Haddii badbaadadu annaga nagu tiirsan tahay oo guusheena aan gaarsiinayno injiilka dadka, waxaa jiri laheyd dhibaato weyn. Laakiin annaga naguma xirna. Waxay kuxirantahay Ilaah oo Eebbe wuxuu u soo diray ciise inuu shaqada qabto Ciise ciise wuu qabtay shaqada.
Waxaan ku faraxsanahay inaan awoodno inaan wadaagno injiilka. Badbaadada dhabta ah ee dadka aan jecel nahay oo aan daryeelo, dadka aanan xitaa aqoon, iyo dadka aad moodo inay waligood injiilka maqlin. Marka la soo koobo, badbaadinta qof walba waa arin Ilaah ka welwelo, oo Ilaah runtiina si wanaagsan ayuu u sameeyaa. Taasi waa sababta aan ugu kalsoonahay isaga, oo kaligiis aan isaga ugu kalsoon nahay!